Okugcwele Kuvalelwe Exchangeable Worktable GS-4020CE - China Dongguan Glorystar Laser
Izici yomkhiqizo ● Nge umnyuziki oluzungezile ebiyelwe design, ukunciphisa laser ngemisebe futhi ugweme noma yikuphi ukulimala lokukhanda. ● Umbelekela le worktable exchangeable ukulondoloza yokulayisha athula isikhathi, futhi chieve okusezingeni eliphezulu umsebenzi kahle. ● High ngokunembile ukugaya gear kanye igiya yokubeka, umsindo ongaphakeme futhi ngokunemba high. ● SMC izingxenye womoya, ukulawula smart ukuze uthole ephelele low-ingcindezi pinching. umkhakha Kusebenza Kabanzi asetshenziswa kuzozonke izinhlobo zezimo imikhiqizo metal izimboni ezifana ishidi ukucutshungulwa metal, Cookware kanye ...
● SMC izingxenye womoya, ukulawula smart ukuze uthole ephelele low-ingcindezi pinching.
amandla Laser 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W (Uyazikhethela)
endaweni Ukusebenza 4000 * 2000mm
Transmission imodi Pinion futhi Rack, Driver Double
Previous: Okugcwele Kuvalelwe Exchangeable Worktable GS-6015CE
Olandelayo: Vula Uhlobo Fibre Metal Laser Cutting Machine GS-3015E
Fibre Laser umsiki 2000w